Iiphakheji zokuKhutshwa kweSuku lokuPhepha koLuntu oluPhezulu | Shayela kwi-91-993.702.7574 yokubhuka
Akusilephuli ukuphucula le veki ukuba awuzange uzibhenye ikhefu okwamanje. Iincwadi zePhepha zoLondolozo lweSuku lwe-Independence Day 10% isaphulelo kuphela Iindwendwe zeNtshontsho zeNtshonalanga N Iihambo. Phakathi kwabahlobo kunye nosapho, uxoxe ngazo zonke izinto onokuya kuzo - ingaba lizwe, okanye uhambo oluhambela phambili ukuya kwindawo esele yangaphandle. Kodwa phakathi kweeyure ezide zomsebenzi kunye nayo yonke into ebeka imfuno ngexesha lakho namandla, ngandlela-thile awunakukwazi ukubhubhisa nayiphi na into okanye yenza uphando oluninzi. Ungesabi, yile nto esona silapha. IiPhakheji Zethu zoKuPhepha kweSuku lokuPhumela kwi-Independence ziza kuhlenga iholide yakho. Bhiyozela lo Mhla woBu-Independence ngokuzalisekisa umnqweno wokuhamba. Fumana 10% isaphulelo kuzo zonke iipakethi ezinikezelwayo. IiPakethi zeSuku lokuPhumela kwi-Independence zilungele ukunika ithuba elihle kuwe nakubathandekayo bakho. Sonke siyakuthanda ukuhamba kodwa ngenxa yeshedyuli esichukumisayo kunye nokuphila okuxakekileyo ngezinye iinkhathi asikwazi ukunandipha ngeveki ezide kunye nexesha elininzi lokuliphepha. Kodwa lo mhla wokuzimela, unokuya kwiindawo ozithandayo ezantsi kwikona yelizwe kunye nehlabathi. Gcina ukhumbule ukuba iPhakheji lokuKhutshwa kweSuku lokuPhumela kwi-Independence lixesha elincinane, kwaye kufuneka ulithathe ngokukhawuleza. Lolu suku lokuzimela unokuhamba kunye nabathandekayo bakho kwiindawo ozithandayo kunye nendawo ekhangelwe kuyo ngaphandle kokwenza umgodi ephaketheni lakho.
Khetha ukusuka kwiintlobo zePhakheji ezikhoyo kwindawo oya kuyo. Ukuba awuzange wenze isigqibo okanye ufune ukwenza ngokwezifiso uhambo lwenkqantosi okanye amahotele kwiPhakethi yeSuku lokuPhumula kwe-Independence, ngoko siyakushintsha uhambo lokuhamba kunye nokwenza ipakethe yesikhokelo, ngokukodwa kuwe. Siyakwazi ukuguqula iphakheji yokuhamba njengendlela yakho, uhlahlo lwabiwo-mali, ubude kunye nabakhenkethi ongathanda ukutyelela. Ngoko, lo mhla wokuzimela uzikhethele inkululeko. Ukhululekile ekuxininiseni kunye neeholide kwaye uhambe kwiiphakheji zokuhamba ezimangalisayo ezivela kwi-Sand Pebbles Tour N Iihambo eziza kukunika iinkumbulo zokuxabisa ubomi.
Ngezantsi siye safumana uphakheji oluninzi ngeendwendwe zethu kule ntsuku ye-Independence weekend: